Ukuklama kuyinto ukudla okunikezwa ingane lapho efinyelela eminyakeni ethile. Imikhiqizo yafaka ukondla ubisi lwebele, okuvumela umzimba wengane ukuthola uhla olubanzi lwezakhi, amavithamini namaminerali. Ngonyaka wokuqala wokuphila, kubaluleke kakhulu ukwakha ukudla okunembile nokulinganisela, ngoba phakathi nalesi sikhathi lapho isisekelo sempilo yengane senziwa khona. Bonke abazali bakhathazekile ngombuzo wokuthi kufanele banikeze ukondla okuhambisanayo ngesikhathi sokuncelisa ingane, yiziphi imikhiqizo ongayinikeza ingane, ngokweziphi uhlelo. Kulesi sihloko sizozama ukuphendula yonke le mibuzo ebalulekile.
Nini ukwethula ukudla okunomsoco ngesikhathi sokuncelisa ingane: imenyu yeminyaka eneminyaka eyisithupha ubudala
Ochwepheshe basezingane baseRussia bacebisa ukwethula isilwane sokuqala kwengane esondla lapho efinyelela ezinyangeni eziyisithupha ubudala. Kuphela ekupheleni kwengxenye yokuqala yonyaka ukuthi uhlakulele ukuzimisela ukuthatha okuhlukile, ngaphezu kobisi, ukudla. I-reflex ye-ejecting yolimi iphela ukusebenza emntwaneni, okungukuthi, ingane ingamgwinya okuthile okudliwayo okunikezwa nge-spoon. Ngalesi sikhathi, ingane ifunda ukuhlala, ixhomeke ku-spoon iphinde ihlanekeze umzimba, ibonise ukungaboni ukudla. Ngokuvamile, ingane iba esebenzayo futhi iselula, ngakho imisebenzi yakhe iqala ukufuna "ukukhishwa kabusha" okungathí sina. Izinyanga eziyisithupha ubudala zibonise isithakazelo ekudleni: zibuka ukudla kwabazali bazo futhi zizimisele ukuzama ukudla kwazo. Kukholelwa ukuthi ubisi lwebele olunezinyanga ezingu-6 luyeke ukuhlangabezana nezidingo eziyi-100% zezinto eziphilayo ezikhulayo. Noma kunjalo, noma ngabe ubhala izimpawu eziningana zokulungela ukuhlola imikhiqizo emisha, kufanele uxoxe ngokuqala kokudla okuhambisanayo nokuncelisa ingane. Ungudokotela ozokutshela ukuthi imuphi umkhiqizo ozofanelana nengane yakho yokuqala ekudleni kokuqala, futhi uma kudingekile ukuqala ukwandisa ukudla komntwana. Ngakho-ke, sihlolisise ukuthi ukwethula ukudla okunomsoco ngesikhathi sokuncelisa kuncelisa kakhulu. Izinyanga eziyisithupha ubudala, okuyinto, ngokusho kwe-Union of Pediatricians yaseRussia, ifaneleka kakhulu ukwethula umkhiqizo wokudla okuqala okuhambisanayo. Noma kunjalo, zonke izingane zingabantu ngabanye, futhi uchwepheshe wakho uzokutshela isikhathi esengeziwe sokuhlola ukudla okusha.
Nini ukwethula ukudla okunomsoco ngesikhathi sokuncelisa futhi kanjani? Imithetho eyisisekelo yokwazisa ingane ngomkhiqizo omusha
Ngenyanga yesithupha yokuphila, umntwana udliwa izikhathi ezingu-5 ngosuku, egcina phakathi kokudla igebe lamahora angu-3.5. Ukuphumula ebusuku kuyamahora angu-10. Isikhwama sokuqala sinqweneleka ukunikela ngesidlo sasemini (amahora angu-12-13), noma ngesikhathi esithile ngaphandle kokusa nokuhlwa. Umkhiqizo omusha unikezwa ngaphambi kokuncelisa, lokhu kwandisa amathuba okuba umntwana abe nesithakazelo ekudleni futhi awugcobe ngenkuthalo enkulu. Qala ukondla kusuka kumthamo omncane kakhulu - isigamu sesipuni sepuniji ye-porridge noma amazambane ahlambulukile yemifino. Futhi ezinyangeni eziyi-10 ezilandelayo ulethe umthamo ngesilinganiso esidingekayo kwengane (cishe 150 g). Ukwakheka kokudla ukuthenga i-spoon ekhethekile ephansi ye-silicone, ukunciphisa amathuba okulimala ngengozi emincintiswaneni yomlomo. Ukuze unikele ngokudla ngokucophelela nangokubekezela, akukho cala kufanele ubeke ingcindezi, ugcizelele futhi uphoqe ingane. Ngemva kokukwazi ukwethula umkhiqizo owodwa, qala "ukuwuhlanza" ngolunye uhlobo lwemifino noma okusanhlamvu. Isibonelo, ungaqala ukondla ngo-sikwashi, emva kwezinsuku ezingu-10, engeza uhhafu wekhaluni le-cauliflower puree. Futhi kancane kancane ukwandisa inani le-cauliflower, kuyilapho unciphisa ivolumu yamazambane ahlambulukile. Ngemva kwesikhashana, imifino ingafakwa amafutha yemifino - umnqumo, i-sunflower, njll.
Uhlelo lokudla okuhambisanayo ekunceliseni ingane, okuphakanyiswa ngabantwana besibhedlela baseRussia
Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokwethula ukudla okuhambisanayo:
Ukuqala kokudla okuhambisanayo namabele angena-gluten-mahhala emanzini - irayisi, i-buckwheat, ummbila;
Ukuqala kokudla okuhambisanayo ne-puree emifino yelinye uhlobo (umbala ohlaza okwesibhakabhaka noma omhlophe) - i-zucchini, i-cauliflower, i-peas, i-broccoli, ubhontshisi wezinhlamvu.
Ukwethulwa kwemifino kunconywa ukuba uqale ingane enezibonakaliso ze-rickets, izifo zokudla, i-anemia. Izingane ezinesisindo somzimba omncane, kanye nokuvame ukubamba izinsana njengomkhiqizo wokuqala wokudla okuhambisanayo zinganikela nge-porridge. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi zonke izingxenyekazi ziphekwe emanzini, noma zisebenzisa ubisi lwebele. Ubisi obomvu obumnyama abuvunyelwe ukuwusebenzisa kuze kube sekupheleni kwezinyanga eziyisishiyagalombili. Izitshalo ezenziwe okwenziwe zibhekwa njengendlela ehlukile yokupheka. Zenziwe ngezinto zokusetshenziswa eziphezulu futhi zihanjiswa ngamavithamini ahlukahlukene kanye nezici zokulandelela. Ngesikhathi sokuqala i-porridge igxila esimweni esiyinkimbinkimbi kakhulu, bese iyenza ibe yinkimbinkimbi kancane kancane, okuholela ekuhambeni kokukhilimu omuncu omuncu. Kancane kancane ungengeza ibhotela kuwo.
Nini ukwethula i-lactation ngesikhathi sokuncelisa ingane: imenyu yeminyaka eneminyaka eyisikhombisa ubudala
Ngemva kokujwayela uhlobo lokuqala lwemikhiqizo, ungaqhubeka nokwandisa kokudla. Isinyathelo esilandelayo sizoba ukwakheka kwesibonakaliso "sekuseni" - ukufaka esikhundleni sokudla kwehora leshumi neminye imikhiqizo, ngaphandle kobisi lwebele. Uma uqale ukondla ingane ngemifino yokudla kwasemini, khona-ke manje umgqeni uyishubhu. Ukukhethwa kokusanhlamvu kokuqala kuncike kumntanakho: uma ingane isondelene nokuqothulwa, kuhle ukuqala nge-buckwheat, uma kukhona i-diathesis - nelayisi noma ummbila. Ama-Porridges alawulwa ngendlela efanayo nemifino: ukuqala ngesigamu sesipuni sokudla kwasekuseni futhi kancane kancane ulethe ingxenye yevolumu kuya ku-150 g. Uma ngabe ukudla kokuqala bekuyi-porridge, ezinyangeni ezingu-7 umntwana kufanele anikezwe imifino. Futhi ngalesi sikhathi, i-yolk iyafakwa (iqanda lezinkukhu libilisiwe kanzima). Qala ukwethulwa kwe-yolk kusuka ezinhlameni eziningana, ulethe ivolumu yenani lomkhiqizo ku-1 pc. Kabili ngesonto. I-Yolk ingaxubha ngobisi lwebele noma ihlanganiswe ne-porridge noma i-puree yemifino.
Ngakanani futhi nini ukwethula ukudla okunomsoco ngesikhathi sokuncelisa? Imikhiqizo kanye nemikhiqizo yobisi
Ngenyanga yesishiyagalombili yokuphila, sekuyisikhathi sokungenisa ingane yakho kwimikhiqizo yokudla. I-puree yenyama inikezwa ngokufaniswa nama porridges nemifino, kuqala nge 1/2 isipuni, ngaphakathi kweviki ivolumu ikhuphukela ku-40-50 g. Zonke izitsha zenyama kufanele zichotshozwe kahle ukuze umntwana angabinyaza kalula futhi angagxili. Okunye okunye okupheka ukupheka ekhaya yizimboni ezizimele zezimboni - ngaphandle kosawoti, izinongo kanye nezinye izithasiselo ezingadingekile. Ukuze uqale ujwayelene nenyama, inyama yenkomo, u-turkey, unogwaja uzolandela. Ngakho, ukwethulwa kwanoma imuphi umkhiqizo kwenziwa ngokuya kwesinye uhlelo. Ekuqaleni umntwana unikezwa ukudla okuncane kakhulu, ukusabela kwakhe kuhlolwe ngokucophelela. Uma konke kuhamba kahle, ivolumu yokudla ikhula kancane kancane. Ngemuva kokwethulwa okusanhlamvu, imifino kanye nenyama ekudleni kwengane kusukela enyangeni yesishiyagalolunye yokuphila, qala ukufaka imikhiqizo yobisi omuncu (i-cottage shizi, i-kefir) nemikhiqizo yokubhaka. Futhi kusukela ngenyanga yeshumi - izithelo purees namajusi (apula, eliphakathi kwe, iplamu, njll). Ezinyangeni ezingu-11 zokuphila, unganikeza ingane inhlanzi. Ngakho-ke, ngonyaka unyaka ogcwele kanye nokudla, futhi ingane ihlanganiswa nokudla kwabantu abadala, idla ngokuhlukahluka kanye nekhwalithi.
Imakethe yemali yomhlaba: izimiso zokusebenza
Isithombe sikaMatrinaona Timofeevna kule nkondlo NA. Nekrasov "Ohlala kahle eRussia"
Ungagcwalisa kanjani isigqoko ngezinaliti zokugaya? Indlela yokubopha isicathulo ngezinaliti zokugaya: amaphethini, incazelo, amaphethini